Laacib ka tirsan Manchester United oo ka hadlay waxa laga filan karo Bruno Fernandes – Gool FM
Laacib ka tirsan Manchester United oo ka hadlay waxa laga filan karo Bruno Fernandes
(Manchester) 04 Feb 2020. Laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ka hadlay waxa laga filan karo xiddiga cusub Red Devills ee Bruno Fernandes.
Daafaca Manchester United ee Diogo Dalot ayaa ka hadlay wax qabadka Bruno Fernandes kaas oo Red Devills ka mid noqday Khamiistii.
Bruno Fernandes ayaa kullankiisii ugu horeeyay ka soo muuqday sabtidii Manchester United ciyaartii Wolverhampton Wanderer ee ku soo dhamaatay 0-0.
Hadaba, Diogo Dalot oo ay isku waddan yihiin Bruno Fernandes ayaa rumeeysan in uu sameeyn weyn ku lahaan doona Old Trafford.
Ka hor inta uusan Bruno iman kooxda, Dalot ayaa saaxiibadiisa Man United u sheegay in xiddig wanaagsan uu yahay, isagoo rumeeysan in ciyaaryahankii hore ee Sporting Lisbon uu soo bandhigi doono heerkiisa ugu fiicna wuxuuna yiri:
“Haa, waa ciyaaryahan qibrad leh, wuxuu ciyaaryay sanado badan”. Dalot ayaa sidaasi sheegay kaddib kulankii ay bareejada 0-0 la galeen Wolves.
“In uu yahay ciyaaryahan qibrad leh waxaad ku ogaan kartaa halka uu ka yimid, wuxuuna sameyn doonaa shaqo fiican”.
“Aniga ahaan layaab iguma ahan, waxaana rumeysanahy in uu ina tusi doono wax badan, sida waxa uu sameeyay kulankiisii ugu horeeyay ee kooxda, waxa uuna soo bandhigay wax cajiib ah”.
“Ciyaartoyda waxay og yihiin in Bruno uu yahay ciyaaryahan fiican, way kala duwan tahay in aad ku aragto dibada kaddibna tababarka maalin walba. wuxuu inoo keeni doona wax badan, wuxuuna naga caawin doonaa in kooxda aan dib u dhisno”.
“Dadka aan aadka u garaneyn Bruno, way i weydiiyaan, waxaana u sheega in uu yahay xiddig fiican”.
“Hadda waxay ku arki karaan tababarka, wuxuu inoo noqon doona saxiix wanaagsan”.
RASMI: Robert Lewandowski oo markiisii 8-aad ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka Poland
Saakay iyo Waxyaabihii ay Wargeysyadu ka qoreen Suuqa kala iibsiga Xiddigaha… (Bale, Mbappe, Lingard & Kuwo kale)